पूर्वयुवराज पारस शाहको अवस्था गम्भीर, अस्पतालले दियो यस्तो जानकारी — Sanchar Kendra
पूर्वयुवराज पारस शाहको अवस्था गम्भीर, अस्पतालले दियो यस्तो जानकारी
काठमाडौं । हृदयघात भएका पूर्वयुवराज पारस शाहको मुटुको दुवै ब्लकेज खोलिएको छ। उनको स्वास्थ्य अवस्था स्थिर रहे पनि गम्भीर छ ।
ललितपुरको मंगलबजारस्थित कोपितेश्वर महादेव र हिरण्यवर्ण मन्दिरमा पूजाअर्चना गर्ने क्रममा अप्ठ्यारो भएपछि उनलाई सोमबार अपराह्न सवा ४ बजे नर्भिक अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो। यसअघि मन्दिरमा डेढ घण्टा बिताएका पारसलाई पञ्चकन्याले फूलमालाका स्वागत गरेका थिए। शाह मन्दिर पुग्दा स्वागत गर्न ललितपुरका मेयर चिरिबाबु मर्हजन समेत पुगेका थिए।
“छातीमा असह्य पीडाको महसुस भएपश्चात् पूर्वयुवराज पारस विक्रम शाहलाई अपरान्ह ४ः१५ बजे नर्भिकको आकस्मिक कक्षमा ल्याइएको थियो,” नर्भिक अस्पतालका कर्पोरेट कम्युनिकेशन आरपी मैनालीले सोमबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “थोरै समय नर्भिकको अन्तर्राष्टिय आकस्मिक कक्षमा राखी जाँचपश्चात् उहाँलाई तत्कालै क्याथल्यावमा सारेर कोरोनरी एन्जियोग्राम गर्दा उहाँको मुटुको धमनी पूर्णरुपमा बन्द रहेको पाइएको थियो । उपरोक्त बन्द (अवरोध) खुलाउन कोरोनरी एन्जियोप्लाष्टी तथा स्टेन्ट प्रत्यारोपण कार्य सफलतापूर्वक सम्पन्न भई उहाँलाई सी.सी.यु.मा सारिएको छ ।”
उनको उपचारमा प्रा.डा. यादवदेव भट्ट लगायत डा. जे.पी. जैसवाल, डा. नग्मा श्रेष्ठ, डा. सन्तोष श्रेष्ठ र एनेस्थेसियोलोजिष्ट डा. प्रज्वल श्रेष्ठको टोली संलग्न रहेको थियो । उनको स्वास्थ्य हाल स्थिर रहेता पनि उनी खतरामुक्त भने नरहेको अस्पतालले जनाएको छ । उनी केहीदिन अस्पतालमै रहनेछन् । रेखदेखका लागि बहिनी प्रेरणा खटिएकी छन् । पत्नी तथा पूर्वयुवराज्ञी हिमानी शाह भने थाइल्यान्डको बैंककमा छिन् ।
श्रीमतीसँग लामो समय छुट्टिएर बसेका उनी केही समययता भने परिवारसँग घुलमिल भइरहेका थिए। पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र र पूर्वरानी कोमल भने सिमरामा थिए। पूर्वयुवराज शाहलाई हृदयघात भएपछि सिमरामा रहेको उनकी आमा तथा पूर्वरानी कोमल गाडीबाटै काठमाडौं आएकी छिन ।
हवाइ जहाजको टिकट नपाएका कारण उनी खबर पाउने बित्तिकै गाडीबाट काठमाडौं आएकी सिमरा इलाका प्रहरीका प्रहरी निरीक्षक सुवास हमालले जानकारी दिए। बुबा ज्ञानेन्द्र भने मंगलबार हवाइ जहाजबाटै काठमाडौं आएका छन्।
कोमल र ज्ञानेन्द्र भ्रमणका निम्ति सिमरामा थिए। उनीहरू हिजो बुद्ध एयरबाट सिमरा गएका थिए। मध्य तराई र झापा भ्रमण गर्ने उनीहरूको कार्यक्रम थियो। यो भ्रमण करिब एक महिनाको तय भएको थियो। छोरा पारसको अवस्था यस्तो भएपछि उनीहरू काठमाडौं फर्किने भएका हुन्।
पारसले वर्ष दिनयता मुटुको औषधि खाएका थिएनन्
पारसलाई हृदयघात भएको यो पहिलोपटक होइन। यसअघि उनलाई कम्तिमा दुईपटक हृदयघात भएको थियो। तर, एक वर्षयता पारसले मुटु रोगसम्बन्धी कुनै औषधि खाएका थिएनन्। ‘उहाँले एक वर्षदेखि रोगसम्बन्धी कुनै पनि औषधि खानुभएको रहेनछ,’ अस्पताल स्रोतले भन्यो।
ब्लकेज खुलाएर स्टेन्ट्ट हालिसकेपछि अहिले उनको इजेक्सन फ्र्याक्सन २५ प्रतिशत पुगेको छ। हृदयघात हुँदा मस्तिष्क र अन्य अंगमा पनि असर पर्न सक्छ। पारसका कुन कुन अंगमा असर परेको छ भनेर सबै परीक्षण हुन बाँकी छ। ‘उहाँ होसमै भएकाले मस्तिष्कमा असर परेको छैन भन्न सकिन्छ,’ स्रोतले भन्यो।